रात पछि चकलेट बाहिर आउछ, रोशनी तल जानुहोस्, र जासूसको वरपरको बारेमा। यसको उनको काम सुनिश्चित गर्न को लागी क्रोक सड़कों देखि दूर छ, खासकर जब उनि अंधेरे मा चारों ओर लुगा। सौभाग्य देखि, त्यो केवल कागजीकरण जासूस सामाग्री भन्दा माथि र बाहिर जान्छ, उनले पुरानो अनुदान को रक्षा गर्न मा मदद गर्दछ आफ्नो दरवाजे को बंद गर्न को लागि र जान्छ खराब जान्छ को लागि डम्पर्स - बचाओ।
यस विशेष खेलमा जासूसले एक थोपा हेक्लल पोइरोटलाई सम्झन सक्छ, जसमा प्रतिष्ठित मेसिन र आकर्षक धनुष। Poirot Agatha क्रिस्टी द्वारा बनाईएको एक काल्पनिक बेल्जियम जासूस हो। Poirot को सीरीज, जासूस, एक पारंपरिक माध्यम संग अपराध को जांच मा ध्यान केंद्रित गर्दै छन्, मतलब कुनै प्रयोगशालाहरु या धोखा देती छैन। अपराधीहरूलाई खोज्नका लागि मात्र आफ्नो क्षेत्रमा विवरणहरू, ध्यान र ध्यानको लागि एक महान दिमाग - जस्तै हामी खेलमा हामी प्रस्तुत छौं।
हामी मनोरञ्जन पेश गर्न गर्व हौं, रातो फोर्स भिडियो स्लॉट पछि Betsoft!
नाइट Falls फीचर पछि
रातको फोहर शहरका गाढा भागहरूमा लिइसकेपछि, एनिमेसनहरू र प्रतीकहरू सबैले अन्वेषण गरेर प्रेरित छन् /घटनास्थल। कम मूल्यवान प्रतीकहरू आभूषणको बैग, ठूलो टिभी, र निगरानी क्यामेरा हुन्। त्यसपछि उच्च मूल्यित प्रतीकहरू आभूषणको बक्स, सानो सुन्तला बिरालो, साथसाथै श्री जासूस, एक सोच-प्रकारको-मोडमा उनको चिनलाई खरिद गर्दै छन्।
तर यी भन्दा कम प्रतीकहरू छन्, अतिरिक्त विशेषताहरू तपाईंलाई केही मजाक सुविधा र ठूलो जीत प्रदान गर्न। हामी तपाईंलाई तलबाट सबै टाढा लैजान्छौँ।
राति नि: शुल्क स्पिनहरू र बोनसहरू पछि
पछि रात फाल पछि केही मनोरञ्जन र इनामदायी सुविधाहरू छन्, जुन हामी तपाईंलाई अबर्फत लैजान्छौं।
दादी बोनस: जब तपाईं3दादी चिन्हहरू (ठूलो चश्मामा सेतो-बाल्ने गर्भवती महिला) लाई पनि रेल्स 1,3र5मा ल्याउनुहुन्छ, तपाइँ बोनस ट्रिगर गर्नुहुन्छ। तपाईं एक समयमा प्रवेश गर्नुहोस् जहाँ एक आपराधिक बस आफ्नो घरमा घुस्यो र तिनका चीजहरू चोरी। बोनसमा तपाईंको लक्ष्य श्री श्री जासूस छनोट क्षेत्रहरू सुचारुका लागि निरीक्षण गर्न चयन गरिएको क्षेत्र हो। यसले तपाईंलाई पत्ता लगाउने सबै प्रमाणहरूको लागि तपाईंलाई क्रेडिट इनाम दिनेछ।
नि: शुल्क स्पिन: स्क्यानर प्रतीक आपराधिक फाइलहरु मध्ये एक हो, र यसले नि: शुल्क स्पिन सुविधाहरू ट्रिगर गर्न सक्छ - जुन तपाईंलाई डिटेकर्स कार्यालयमा पठाउँछ। यहाँ तपाईं यादृच्छिक गुणकसँग निःशुल्क क्रेडिटहरू कमाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईँको जीतलाई 2x र 10x बीचको जित्न सक्दछ। प्रत्येक पल्ट जब तपाईं स्पिन गर्नुहुन्छ, गुणक तपाईंसँग फैलिन्छ। तपाईलाई पछ्याइएको रूपमा सम्मानित गर्न सकिन्छ:
2 तपाईं 60 क्रेडिटहरू पुरस्कारहरू स्क्यान गर्नुहुन्छ
3 तपाईले 10 नि: शुल्क स्पिन पुरस्कारहरू स्क्यान गर्नुहुन्छ
4 तपाईले 15 नि: शुल्क स्पिन पुरस्कारहरू स्क्यान गर्नुहुन्छ
5 तपाईले 25 नि: शुल्क स्पिन पुरस्कारहरू स्क्यान गर्नुहुन्छ
5 कमरहरू मलाई क्लिक गर्नुहोस् फीचर: जब3वा आपराधिक प्रतीकहरूको थप रिसेलमा देखा पर्दछ, तपाइँ यो सुविधा ट्रिगर गर्नुहुन्छ। यो फीचरको लक्ष्य तपाईं को लागि अपहरणकर्ता को क्रेडिट को लागि चोरी गर्न को लागि अपार्टमेंट मा आपराधिक बस्ट गर्न अगाडि ढोका छ। तपाईं "सङ्कलन" प्रदर्शित नभएसम्म कोठाहरू रोज्न सक्नुहुन्छ।
जंगली घुमाउनुहुन्छ: जब तपाईले रिलेहरूमा कुनै पनि स्थितिमा म्याग्निङ ग्लास प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँ यो सुविधा ट्रिगर गर्नुहुन्छ। यो विशेष गिलास एक जंगली रूपमा काम गर्नेछ र जबसम्म यो पर्दामा नि: शुल्क स्पिन सिर्जना गर्नेछ। प्रत्येक स्पिन, यो बाँया सम्म एक रिेल लेउनेछ जब सम्म बायाँ-सबैभन्दा रिel सम्म पुग्छ। त्यसपछि फेरि एक अन्तिम नि: शुल्क स्पिन दिने गायब हुनेछ।
रात फाल्स पेआउट पछि
रात फल्स पछि5पङ्क्तिहरूमा3रिल्ससँग खेल्ने एक भिडियो स्लॉट हो, र थप 30 paylines।
जब पनि खेलमा सम्पूर्ण रिेलले स्तम्भमा एक समान प्रतीक समावेश गर्दछ, एक अतिरिक्त क्रेडिट विजेता त्यस प्रतीक संयोजनको लागि 3x प्रतीक भुक्तान बराबर गरिनेछ। संक्षिप्त प्रतीकहरू एक अतिरिक्त प्रतीकमा मर्ज गर्नेछ जुन दुई अतिरिक्त प्रतीकहरू स्थानमा पुग्न अनुमति दिन्छ। यसले जीतहरूको थप थप मौका दिनेछ।
नाइट Falls ग्राफिक्स र संगीत पछि
नाइट फाल्स पछि पूर्ण उच्च-परिभाषा र 3D प्रभावहरूको खेल हो, एक निर्दोष डिजाइन र हेर्नको लागि। तपाईं एक जासूस प्रेरित एनीमेशन फिलिम हेर्दै भए तापनि, यो खेल 'सर्वश्रेष्ठ गुणहरूमध्ये एक हो। यसले यसलाई धेरै मनोरञ्जन र सजिलो बनाउँछ।
रालहरू रातको सहर शहरको गलीमा ईंट भित्ताको छेउमा राखिएको छ, कारहरू, डम्पर्डहरू र भित्री ईट्टा पर्खालहरू। श्री जासूस आफ्नो ठूलो मूंछ मा रिल्स को बगल मा खडा छ, डम्पस्टर मा झुकाव हरेक पल्ट एक पल्ट एक बिल्ली को बचाने को लागि।
Betsoft को बारे मा
Betsoft एक कम्पनी कम्पनीलाई 1999 मा अनलाइन अनलाइन क्यासिनो विकासकर्ताको रूपमा फिर्ता स्थापना गरिएको छ। उनीहरूको मुख्य फोकस अभिनव खेलहरू साथै उनीहरूको धेरै अपरेटरहरूको लागि विश्वसनीय सफ्टवेयर उत्पादनहरू प्रदान गर्दै थिए। Betsoft उनको रचनात्मक र राम्रो तरिकाले मनपर्ने खेलहरूका लागि राम्ररी एक कम्पनीमा विकसित र वृद्धि भयो।
2012 मा शुरू, बेटसस गेमिङले मोबाइल भिडियो स्लटहरूको विशेष टूगो ™ लाइनको साथ मोबाइल आईगिंग बजारमा एकाग्र धक्का सुरु गर्यो। आईओएस उपकरणहरूको लागि अनुकूलित, यी पोर्टेबल गेमहरूमा उनीहरूका केही लोकप्रिय स्लट्ट्स3™ शीर्षकहरूको विस्तार विस्तार सूची समावेश गर्दछ, जस्तै स्लाथफेर, सफारी शमू, र तीन इच्छाहरू। तिनीहरूको ToGo ™ संग्रहले मूल स्लॉट्स3™ खेलहरूको सबै गुणस्तर र विवरणहरू राख्छ। यो Betsoft को लागि एक ठूलो लन्च थियो, र उनीहरूको लागि एक महान समय। उनीहरूले सम्मानित र सफल प्रदाताको रूपमा एक नाम स्थापित गरेका थिए, र सफलता अपरिहार्य थियो।
Betsoft खेल आज उद्योग भर मा उनको राज्य को अत्याधुनिक, सच्चे 3D ग्राफिक्स, उत्तेजक ओडियो र सहज gameplay को लागि प्रसिद्ध छ।
आजको एननिमेटेड फिचर फिल्महरू र कन्सोल भिडीयो खेलहरूमा भेटिएका सटीक स्तरहरूमा निर्मित स्टुडियो, सत्य 3D सिनेमा चलचित्र एनीमेशनमा प्रस्तुत गरिएको छ, बेन्टसस गेमिङले 150 खेलहरूमा व्यापक संग्रहको समृद्धि गर्दछ।
???? € 455 मुफ्त कैसीनो चिप
???? € 250 मुफ्त चिप कैसीनो
???? 255% उत्तम साइनअप बोनस कैसीनो
💵 810% उत्तम साइनअप बोनस कैसीनो
💵 पाउन्ड 4525 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 $ 675 फ्री कैसीनो चिप
💵 £ 4235 जम्मा रकम बोनस छैन
💵 यूरो 190 फ्री कैसीनो टिकट
💵 पाउन्ड 410 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 पाउन्ड 380 नि: शुल्क चिप
💵 € 1960 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 यूरो 2635 जम्मा रकम छैन
💵 $ 135 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 450% स्वागत बोनस
💵 यूरो 385 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 € 660 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 60% क्यासिनोमा मिलान
💵 € 1660 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस
💵 675% पहिलो जम्मा बोनस
💵 € 777 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 पाउन्ड 590 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 £ 2150 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 € 2165 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 $ 370 FREE कैसीनो चिप
💵 € 395 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 यूरो 111 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 £ 535 FREE CHAS CASINO
💵 $ 3745 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 $ 880 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 845% बोनस
💵 60% जम्मा जमा बोनस
💵 $ 130 नि: शुल्क चिप
💵 यूरो 2350 कुनै जम्मा बोनस छैन
💵 145 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 यूरो 80 मुक्त क्यासिनो चिप
💵 € 95 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 160% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 € 155 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 $ 505 फ्री कैसीनो चिप
💵 $ 230 FREE कैसीनो चिप
💵 € 685 फ्री कैसीनो चिप
💵 € 235 फ्री चिप
💵 यूरो 4690 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 पाउन्ड 500 कैसीनो चिप
💵 यूरो 1425 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 EUR 265 कैसीनो चिप
💵 EUR 135 जम्मा बोनस छैन
💵 पाउन्ड 655 नि: शुल्क चिप
💵 € 4540 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस
💵 44 फ्री spins
💵 EURO 90 नि: शुल्क नगद
💵 80% पहिलो जम्मा बोनस
💵 EUR 1005 कुनै जम्मा बोनस छैन
रात पछि अपडेट गरिएको: फेब्रुअरी 7, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 रात पछि
3.0.0.0.1 वाइकिङ दौड
3.0.0.0.5 क्यालिफोर्निया सुनहरा
3.0.0.0.6 रातो झण्डा बेडा
3.0.0.0.7 बिग बंग
3.0.0.0.11 जोली रोजर
3.0.0.0.13 भेनिसको मन
3.0.0.0.15 पूर्ण चन्द्र भाग्य
3.0.0.0.16 जंगली पकड
3.0.0.0.17 नानी ओ पैसा
3.0.0.0.19 साइबर्स्टुड पोकर
3.0.0.0.20 पशन संचयन
3.0.0.0.21 चुरोट र जादूगर
3.0.0.0.23 फुटबल प्रशंसकहरू